पाथीभरा दर्शनका लागि जाँदा लेक लागेर दुई वर्षीय बालकको मृत्युु ! - समृद्ध नेपाल
ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभराको दर्शनमा आएका एक बालकको लेक लागेर मृ’त्यु भएको छ । प्रहरीका अनुसार पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका–८ याङ्नामका दुई वर्षीय बालक उत्सव लिम्बूको आज मृत्यु भएको हो ।अभिभावकले आफ्ना बालकलाई पाथीभरा दर्शनका लागि लिएर आएका थिए । देवीको दर्शन गर्न जाने क्रममा पाथीभरा
क्षेत्रको फेदीबजार नजिक बाटोमै अचानक बेहोस भएपछि बालकलाई उपचारका लागि ताप्लेजुङ जिल्ला अस्पताल ल्याइएको र उपचारकै क्रममा बालकको मृत्यु भएको हो ।यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला यता जिल्ला अस्पतालमा उपचारका क्रममा बालकको मृत्यु भएपछि शव अभिभावक रामबहादुर लिम्बूलाई बुझाइएको
जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङका प्रहरी निरीक्षक मोहन पोखरेलले जानकारी दिए।विगतमा चिसोका कारण लेक लागेर केही तीर्थयात्रीले ज्यान गुमाएका थिए भने बालकको पनि लेक लागेर नै मृ’त्यु भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।तस्बिर सान्दर्भिक यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला
सिङ्गो भारत जुट्यो यी बालकलाई बचाउन मोदीले गरे ट्वीट !
उदयपुरको आशिष बचाउ अभियान !
भनेकी बलिउड अभिनेत्री मल्लिका सेरावत नेपालमा ‘बुद्धको जम्नाभुमि भ्रमण गर्न आतुर !
एपी वानले कार्यक्रम निलम्बन गरेपछि युट्युवमा आयो रजतपट, प्रकाशले बनाए यस्तो कार्यक्रम !
उपत्यकामा २२ वैशाखदेखि फेरि एक हप्ता निषेधाज्ञा थपिने !
पेट्रोलियम् ट्यांकर र बस ठोक्किदा आगलागी जलेर ५३ जनाको ज्यान गयो !
पण्डितहरुलाई सांस्कारिक कर्म गर्ने वातावरण बनाइदिन माग !
अक्षयले उपहारमा ट्विंकल खन्नाले प्याजको झुम्का लगाएर सेयर गरिन् तस्बिर !
राजेन्द्र खड्गीले गरे फेरि अर्को खुलासा मह जोडि पनि छुटेका थिए मैले यसरी मिलाको हो !